‘भ्रष्टाचारीलाई जनकारबाही गर्नुपर्यो भनेर मलाई हिमाल र पहाडबाट फोन आईरहेको छ, यसमा हामीलाई गर्व छ’ ः सीके राउत - मनकामनापोष्ट
Written by मनकामनापोष्ट•	October 28, 2021• 9:03 am• ताजा अपडेट, बागमती प्रदेश, मनकामनापोष्ट स्पेसल, राजनीति, राष्ट्रिय, समाज
‘भ्रष्टाचारीलाई जनकारबाही गर्नुपर्यो भनेर मलाई हिमाल र पहाडबाट फोन आईरहेको छ, यसमा हामीलाई गर्व छ’ ः सीके राउत
काठमाडौं,कार्तिक ११ गते । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले आफूहरुले कहिले हिंसात्मक गतिविधि गरेका थियौं ? भनेर प्रश्न गरेका छन् । उनले भने,‘हामीसँग कहिले हतियार थियो र ? राज्यले पो त हाम्रो मान्छेको हत्या गरेको हो नि । राज्यले हाम्रो मान्छेलाई समातेर हिरासतभित्र हत्या गरेको हो । हामीले त बदलामा फूल दिएका थियौं ।’
हिजो राति प्राइम टिभीबाट प्रसारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा उनले जनकपुरमा खानेपानीका प्रमुखमाथि जनकारबाही गरेको स्पष्ट पारेका छन् । आफूहरुले कानून हातमा नलिएको उनको भनाई छ । उनले अहिले आफूलाई हिमाल र पहाडबाट यतापनि आउनुपर्यो र भ्रष्टाचारीलाई जनकारबाही गर्नुपर्छ भनेर फोन आएको सुनाए ।
यदि यही तवरले सुरक्षाकर्मीले हत्यारालाई संरक्षण गरिरहे जनताले भोलि प्रतिकार गर्नसक्ने पनि उनको चेतावनी छ । उनले आफूहरु न्यायको पक्षमा उभिँदै आएको स्मरण गराए । जनकपुरमा जागेश्वर कुशवाहले करोडौं करोड भ्रष्टाचार गरेको उनको दाबी छ । उनले आफूहरुले प्रमाणसहित अख्तियारमा उजुरी दिएको पनि सुनाए ।